Ny vaovao avy aty amiko. – Zaza no iriako
Ny vaovao avy aty amiko.
Posted on November 23, 2016 by zazanoiriako
Talata 13 octobra 2015
Tena efa ela be zaho tsy nahavoasotra ato marina moa e! Eny e! Tsisy vaovao azo naroso dia aleo nangina aloha ,sady toa be asa loatra aho tatohoato dia lasa tsy mahavoasoratra mihitsiny. Mametraka ny fialantsiny hoanareo zay mpamaky ny lahatsoratra arosoko.
Manana vaovao aho,vaovao zay azo lazaina oe tsara (tsia ,tsy mbola ilay eritreretinao re? ) ,fa tiko lazaina dia oe efa misy dingana vaovao nodiavoko ndray.
Ny vaovao dia nahazo taratasy avy amin’ ny clinic aho , 7 Aogositra lasa teo, faly ery aho fa mba nisy vaovao ihany nony farany fa zaho nge dia tena nangina mihitsiny nandritra iny volana jiona sy jolay iny. Hay moa nony tonga ny Aogositra dia nahavoaray taratasy avy amin’ny clinic ihany.
Sabotsy 28 Aogositra : Fitiliana ra
Ny zoma 27 aogostra no tonga fadimbolanako volana io,dia faha 2 na faha 3 ny andro fadimbola no tsimaintsy manao fitilina ra,maro be moa zavatra nojerena taminy ilay ra nalaina teo fa tena hadinoko mba naka sary anilay taratasy .
Ty misy tantara kely: nony avy naka ra zaho dia avy dia maika be satria nisy dia izahay halehako izy handraisako fiaramanidina,avy dia nataoko teo amin’ny soroko ny tanako izay avy naka ra ary ty poketra,inona hozy nareo fa toa naheno zavatra nafanafana aho mikorina ny tanako ,jereko hay ra be no jininika manaraka ny tanako,tsy nahasarona azy akory ilay vovoha zay natao teo,tsara fa mainty ny akanjo nanaovako,no sady vo tao anatin ilay trano fitsaboana dia efa hita. Teo izaho vao mahalala oe hay moa refa maka ra dia tsy tokony hampiasaina amin’ny zavatra mavesatra ity tanana izay nakana ra. Mahay lesona vaovao ndray zany koa teo.
Talata 01 septambra 2015 : Ultrasound vaginal scan
Nanana fotona tao amin’ny clinic izaho taminy 3 ora tolakandro. Zay ndray izaho vo nifanena tamin’ny dokotera Cici ,ny nifakahitanay farany dia taminy 23 decembra tamin’ny heritaona. Mahafinaritra ndray nahita azy,mitondra fanantena ery fahitana azy sy ireo mpitsambo mpanampy azy.Ny natao moa tamin’ io dia ultrasound vaginal scan. Naharitra teo amin’ny 15 mn teo lay izy. Tena tsisy olona mihitsiny ny ahy ny tranonjaza ,madio tsara,nahateny mihitsiny aza i dokotera Cici “ndray tena photo genic mihitsiny ny tranonjazanao,tsy ahitana olana mihitsiny” Faly mihitsiny aho naheno anizay,satria afaka miroso aminy dingana manaraka zany.
Alarobia 02 septambre 2015
Miantso ndray ny mpampivelona “nurse” fa any amin’ny farany volona octobra na any amin’ny fanombohany volana novambra ndray fotoana hihaonana manaraka (ny fahitako azy toa miakina amin’ny fadimbolanako amin’ny volana octobre ny hanombohana hanaovana anilay fihaonana manaraka …) Izay hampianarana ny fomba hampiasana ireo fanafody izay hampiasainako,ary amin’io andro io koa hanaovana sonia ny fifanekena rehetra.
Dia zay ny vaovao azoko ambara re ry mpamaky,dia tena etanimpifalina sahady aho ato,eo roa volana eo zany sisa dia afaka miroso amin’ny dingana goavana izahay. Tsy andriko tsony,tena tsy andriko anie zany e!
Zay fa mametraka mandra-mpanoratra ndray,dia ialako tsiny raha dia nampiandry 4 volona aho vao nanoratra satria tena tsy nisy vaovao taty amiko. Misaotra anao zay mamaky ny lahatsoratrako hatrany.
Tagged fitaizana, malagasy, zaza
Tratry fety Reny e!
Manomboka ny tsindrona maro